5 एम्स्टर्डम रेल देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5एम्स्टर्डम रेल देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
एम्स्टर्डम यात्रा गर्न एक भव्य शहर हो. त्यहाँ छ त्यसैले हेर्न र गर्न धेरै यहाँ तपाईं शायद प्राप्त नरमाइलो कहिल्यै हुनेछ. तथापि, यो अझै पनि कुराहरू माथि मिश्रण ठूलो हुनेछ. किनभने एम्स्टर्डम धेरै अचम्मको दिन यात्राको लागि ठूलो विन्दु हो भन्ने छ.
त्यसैले, तपाईं एम्स्टर्डम सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको केही मा जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सही ठाँउ छनौट गर्न. यस लेखमा, हामी शीर्ष पाँच दिन तपाईं एम्स्टर्डम देखि लाग्न सक्छ यात्राको कवर. पनि, हामी तपाईंलाई सबै कसरी यी ठाउँहरू पुग्न तपाईंले आवश्यक जानकारी र दिनेछु रेल बाट. टुकडा को अन्त द्वारा, तपाईं सबै कुरा हुनेछ तपाईं एम्स्टर्डम देखि एक अविश्वसनीय साहसिक सुरु गर्न आवश्यक!
1. लन्डन: एउटा एम्स्टर्डम देखि धेरै सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू!
एम्स्टर्डम देखि एक दिन यात्रा मा जाने निर्णय गर्दा, सबै भन्दा मान्छे वरपर मा केहि लागि रोज्न. के नेदरल्यान्ड मा शहर छन् आपत्ति आउँछ, बेल्जियम, र शायद जर्मनी. तथापि, तिनीहरूले शायद लन्डन जाने निर्णय.
हाम्रो विचारमा, यो एम्स्टर्डम देखि धेरै राम्रो दिन यात्राको तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ मध्ये एक छ. किन? यो दिन यात्रा अक्सर अनदेखी किनभने छ. त्यसैकारण, तपाईं एक हुन सक्छ अद्वितीय अनुभव धेरै पर्यटक बिनै आफ्नो ठाउँ crowding.
कि माथि, लन्डन रोचक कुराहरू धेरै संग एक विशाल शहर हेर्न र गर्न छ. प्लस, यो इतिहास र अद्भुत वास्तुकला भरिएको छ. यदि सबै कि, तपाईं पनि मुनि पारित गर्न मौका प्राप्त हुनेछ प्रसिद्ध अंग्रेजी च्यानल.
तपाईं जाने निर्णय भने, यहाँ तपाईं मा आवश्यक अलि जानकारी छ रेल सवारी. यो रेल मार्फत लन्डन पुग्न वरिपरि चार घन्टा लाग्छ. यसलाई अलिकति लामो छ, तर धेरै मानिसहरू एम्स्टर्डम देखि उत्तिकै टाढा क्षेत्रमा यात्रा रूपमा, यो सम्भाव्य भन्दा बढी छ. तपाईं के गर्न आवश्यक सबै प्रारम्भिक सुरु र लेट फिर्ता छ, र तपाईं लण्डन सम्पूर्ण दिन भइरहेको अन्त हुनेछ.
2. प्रयोग: जहाँ परी कथा सुरु
हामी सबै एम्स्टर्डम को सौन्दर्य मुख्य रूप यसको नहरहरुमा र वास्तुकला मा झूट थाहा. तथापि, तपाईं सबै ब्रुग्स मा अवस्थित छ थाहा थिएन, बेल्जियम? जे भएपनि, तिनीहरूले उत्तर को भेनिस कल ब्रुग्स छ, छैन एम्स्टर्डम!
के थप छ, ब्रुग्स मात्र कि सबै छ तर सबै भन्दा राम्रो को छ परी कथा युरोप को सबै सहर. त्यो एम्स्टर्डम तपाईंको दिन यात्राको लागि त्यहाँ एक यात्रा सबै भन्दा राम्रो समाधान को एक बनाउँछ.
तपाईं ब्रुग्स जाने निर्णय भने, तपाईं युरोप को सबै भन्दा सुन्दर मध्ययुगीन भवनहरु केही मा Marvel गर्न मौका प्राप्त हुनेछ. र यदि त्यो पर्याप्त थिएनन्, ब्रुग्स सबैभन्दा स्वादिष्ट केही दावा हस्तनिर्मित चकलेट!
जब एम्स्टर्डम देखि ब्रुग्स जाँदै, तपाईं सजिलै गर्न सक्छन् रेल जान. सारा यात्रा धेरै सस्तो छ, र यो तपाईं भन्दा कम तीन घण्टा लिन जादुई शहर पुग्न हुनेछ.
एम्स्टर्डम ब्रुग्स गाडिहरु गर्न
3. हेगुइ: तपाई यो छुटाउन सक्नुहुन्न!
एम्स्टर्डम सबै दिन यात्राको आउट लाग्न सक्छ, हेगुइ छुटेका छैन पर्छ भनेर एक. यसको लागि मुख्य कारण हेगुइ नेदरल्यान्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर मध्ये एक छ भन्ने तथ्यलाई छ. यो पनि सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक छ.
एक गएर लागि कुनै पनि थप कारण आवश्यक हुँदैन. तथापि, तपाईं अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हेगुइ एम्स्टर्डम धेरै नजिक छ भनेर सजग हुनुपर्छ. को रेल सवारी मात्र एक घण्टा वरिपरि लिन्छ र अति सस्तो छ.
हेगुइ नेदरल्यान्ड मा सरकार को सीट छ, तपाईं प्रभावशाली भवनहरु धेरै देख्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ त. शहर पनि न्याय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय को स्थान छ, जो अर्को छ ठाउँ हेर्नु पर्छ.
अन्त मा, तपाईं हेगुइ पुग्न गर्दा, बनाउन भ्रमण गर्न निश्चित Madurodam. यो एक लघु Adore अवश्य तपाईंले पार्क छ.
गर्न हेगुइ गाडिहरु ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प हेगुइ गाडिहरु गर्न
घेंट हेगुइ गाडिहरु गर्न
ब्रुग हेगुइ गाडिहरु गर्न
4. कोलोन: जर्मनी एक अक्सर छुटेका रत्न
जर्मनी धेरै अचम्मको शहर भरिएको देश हो. तथापि, शायद मान्छे एम्स्टर्डम देखि आफ्नो दिन यात्राको एक लागि तिनीहरूलाई को भन्दा विचार गर्न.
तापनि कि मामला छ, जर्मनी अझै पनि भ्रमण लायक छ. तपाईं कोलोन जाने निर्णय भने त्यो विशेष गरी साँचो हो, पश्चिम जर्मनी एक अक्सर भूल मणि. उत्तिकै भव्य राइन नदी को बैंकहरू मा भव्य शहर झूट. के थप छ, कोलोन अर्थव्यवस्थाको केन्द्र हो, संस्कृति, र पश्चिम जर्मनी को पर्यटन.
तपाईंले यो अद्भुत शहर जाने निर्णय भने, तपाईं एडमाएर इतिहास को वर्ष हजारौं हुनेछ. शहर को धेरै केन्द्र मा एक विशाल गिर्जाघर निहित. यो सबैभन्दा धेरै छ उपासनाको आश्चर्यजनक ठाउँ तपाईं युरोप को सबै देख्न पाउनु हुनेछ.
कोलोन बारेमा राम्रो कुरा यो मात्र वरिपरि तीन घण्टा टाढा छ भन्ने छ मार्फत रेल. त्यसैले, तपाईं एक दिन यात्राको लागि त्यहाँ जाने निर्णय भने, तपाईं कुनै समय मा शहर पुग्न हुनेछ.
बर्लिन आचेन गाडिहरु गर्न
ड्रेस्डेन कोलोन गाडिहरु गर्न
आचेन कोलोन गाडिहरु गर्न
5. पेरिस गर्न दिन यात्रा एम्स्टर्डम देखि: के थप भन्नुहोस्?
पेरिस गर्न एम्स्टर्डम देखि रेल यात्राको धेरै लामो हुन प्रयोग. तथापि, लेट को रूपमा, तिनीहरूले मात्र अन्तिम वरिपरि तीन घण्टा, पेरिस सिद्ध गन्तव्य बनाउने एक लागि आफ्नो एम्स्टर्डम देखि दिन यात्राको.
यसको कला संग्रहालय लागि प्रसिद्ध, वास्तुकला, र भोजन, पेरिस कुनै परिचय आवश्यक छ कि एक गन्तव्य हो. थप यसलाई romanticize वा तपाईं लोभ्याउन सक्ने यो प्रसिद्ध शहर बारेमा भने गर्न छ सानो.
भर्साइल्लेज गर्न Eifel टावर बाट, पेरिस संग टोपीको घेरा गर्न भरिएको छ ठाउँहरू भ्रमण गर्न र के गर्न कुराहरू. प्रकाश शहर सारा संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हो, र हामी सबै किन थाहा. त्यसैले, यसको बारेमा र बस आफ्नो समय पढाइ बर्बाद छैन त्यहाँ जाउ!
यी पाँच एम्स्टर्डम देखि सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको आफ्नो छुट्टी अविस्मरणीय बनाउन पक्का, र किनभने तिनीहरू सबै सजिलै रेल द्वारा पहुँच भइरहेको हो, के तपाईं युरोप मा हुँदा यात्रा गर्न कुनै बहाना छ!
र, तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ भने, सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 एम्स्टर्डम रेल देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-amsterdam/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / डे गर्न / fr वा / ES र अधिक भाषा.
डेट्रिप्स europetravel रेल यात्रा ट्राभेलमस्टरडम ट्राभेलबिजियम यात्री भूमि travelgermany travelnetherlands ट्राभेलपारिस